UBaccus uhlohla ozakwabo ngokuyimpintshela ekhoneni iHoroya - Impempe
UBaccus uhlohla ozakwabo ngokuyimpintshela ekhoneni iHoroya
UKearyn Baccus noRamahlwe Mphahlele
IKaizer Chiefs inethuba lokugcina ngci lokuzama ukuzibekisela indawo kuma-quarterfinal eCAF Champions League njengoba izovakashela iHoroya AC ngoMgqibelo ngo-9 ebusuku.
La maqembu abambane ngo 0-0 emdlalweni womlenze wokuqala eNingizimu Afrika. Womabili anamaphuzu ayisishiyagalombili kanti ukudlala ngokulingana ngo 0-0 kuzosho ukuthi sekuphele kanjalo ngaMakhosi kulo mqhudelwano. Ukubambana ngo 1-1 noma ukuwina kweChiefs yikona okungayiweza ngelibanzi kulo mdlalo.
Njengamanje izinto aziyihambeli kahle iChiefs emidlalweni yeDStv Premiership, nokuchaza ukuthi kumele izame ukubambelela emidlalweni yeChampions League njengoba kungasekude phambili uma kuphela imidlalo yamaqoqo.
UKearyn Baccus odlala esiswini kwiChiefs ukholwa ukuthi kumele bahlasele, bengalokhu behlala emuva uma sebebhekene neHoroya ngoMgqibelo.
“Amajita anomdlandla, sesikulungele ukudlala futhi sifuna ukwenza kahle kwiChampions League njengoba singenzi kahle kwiligi okwamanje. Silungile futhi sijabulile,” kusho uBaccus.
Emdlalweni wokugcina weChampions League iChiefs ishaye iWydad Athletic Club yaseMorocco ngo 1-0, eFNB Stadium, nokuyinto eyinike ithuba elingcono lokudlulela phambili kulo mqhudelwano.
“Sike sathi ukuphumula usuku olulodwa (ngoLwesithathu) ngoba besinomdlalo ngoLwesibili (neStellenbosch). Kodwa konke kuhamba kahle futhi umoya muhle kakhulu ekhempini yethu. Njengoba ngishilo sikulungele ukudlala ngoMgqibelo,” kuchaza uBaccus.
Akwaziwa ukuthi iChiefs izowuthatha kanjani lo mdlalo njengoba izobe edlala ekuhambeni kodwa idinga igoli ukuze iqhubekele phambili kwiChampions League.
“Ngokwami ngincamela ukuthi sihlasele, sishaywe kunokuthi sihlale emuva kungabi khona iqembu eliwinayo. Ngokwami uma sivele sihlasela akukho okuzosilahlekela.
“Isipiliyoni esitholwa abadlali abasebancane kule midlalo sikhulu kakhulu. Njangamanje uNgcobo (Nkosingiphile) wenza kahle, uHappy (Mashiane) wenza kahle naye. Baphakamise izinga okuyinto enhle ngalesi sikhathi esinzima sibadinga kakhulu. Nathi njengabadlali asebekhulile kumele sidlale indima yethu. Ngiyethemba ngoMgqibelo sizokwenza kahle, sithole umphumela omuhle,” kuphetha uBaccus.
Previous Previous post: UMcCarthy uvuma ulobi ngomsebenzi weBafana
Next Next post: UYAKHUMBULA?: Sibuyekeza isizini yokuqala ngaphansi kwePSL